Gaanaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:094:09
Weellisaan beekamaan Gaanaa sababa raajii sobaa... lubbuun koo balaarra jiraa jechuun sodaatee baqachaa akka jiru feesbuuk gubbaatti maxxanse. Biyyattii keessa nagaan jiraachuuf wabii akka barbaadus hime.
...tti maxxanfame 4:10 29 Fuulbaana 20214:10 29 Fuulbaana 2021
Hawaasa Gaanaa foon saree fi adurree soorachuun beekaman
Gaanaa bulchiinsa Voltaa keessatti foon adurree fi saree akkaan beekama, beelladoonni kunneen maqaa masoo 'Joseph' jedhamuun waamamu.
...tti maxxanfame 4:13 16 Fuulbaana 20214:13 16 Fuulbaana 2021
Biyya Lixa Afrikaa Gaanaatti Televijiniin 'TV3' jedhamu dorgommii miidhaginaa 'Ghana's Most Beautiful' sagantaa gosa 'Reality show' jedhamuun erga tamsaasuu eegalee amma waggaa 14'ffaa isaarratti argama.
...tti maxxanfame 6:23 28 Hagayya 20216:23 28 Hagayya 2021
Gaanaatti Imaamni Islaamaa ijaarsa bataskaanaaf doolaara 8,000 arjooman
Maanguddoo waggaa 102 fi dureen amantaa Islaamaa kunis sababiin kennaa kana kan raawwataniif yoo himan, walitti dhufeenya naga qabeessaa amantaa Kiristaanaa fi islaamaa jidduu jiru cimsuufan jedhaniiru.
...tti maxxanfame 4:41 14 Adooleessa 20214:41 14 Adooleessa 2021
Mormiin kan mudate giifti-dureen Gaanaa durgoo waggoota afuriif fudhatan deebisuuf
Giifti-dureen Gaanaa kanfaltii durgoo erga abbaan waarraa isaanii aangoo qabatan bara 2017 kaasee fudhatan hunda akka deebisan himan.
...tti maxxanfame 4:22 24 Caamsaa 20214:22 24 Caamsaa 2021
Gaanaa keessa dubartiin dulloomtuun maaf hin jirre?
Gabaasaa xalayaa gaazexessitoota Afrikaa keenyaan, barreessituu lammii Gaanaa Elizaabeet Ohenee yeroo weerara koronaavaayirasiitti shaakala baredinaa baratamaa hintaane fayyadamuu eegaluu ishee himti.
...tti maxxanfame 9:44 17 Ebla 20219:44 17 Ebla 2021
Abbaan seeraa mana murtii Akraa keessatti argamutti wayita adabbii irratti murtaa'e dubbisaa turanitti, imimmaan buustee boosse.
...tti maxxanfame 13:17 24 Guraandhala 202113:17 24 Guraandhala 2021
Talaalliin Covid yeroo jalqabaaf karaa Covax addunyaarratti dhiyaachuu eegale
Biyyi Gaanaa talaallii koronaavaayirasii gama Covax dhiyaatu fudhachuun biyya jalqabaa taate.
...tti maxxanfame 13:17 10 Guraandhala 202113:17 10 Guraandhala 2021
Dubartiin haphee fayyadamuun buqqeen mataafi rifeensi walitti dhine wallaansa argatte
Dubartiin Gahaanaa tokko rifeensashee akka walitti qabuuf jecha haphee ‘Gorila Glue’ jedhamu fayyadamuun rifeensiifi buqqeen mataa walitti dhinee rakkaataa akka jirtu miidiyaa hawaasaarratti torban darbe himachaa turte.
...tti maxxanfame 15:16 21 Amajjii 202115:16 21 Amajjii 2021
Hakiimonniifi Narsoonni hanna daa'immaniin shakkaman to'ataman
Gaanaatti ogeeyyiin fayyaa dhaabbilee fayyaa keessatti daa'imman dhalatan hataniifi daddabarsa daa'immanii seeraan alaan shakkaman to'ataman.